Wisata Singapura TempatwisataBizID - LamaUtama - Priokville44
Yasebusuku e Clarke louay koko eli hub qela of Singapore idume ngokwenene. izibane ezibengezelayo, abantu ezintle kwimijuxuzo ndii - ezi zezinye izinto kunokubethelela ngokwabo engqondweni yakho xa ungenayo kwixesha lokuqala undwendwela Clarke louay, Boat louay kunye bhuqe imivalo kombono kunye pubs ecaleni Singapore River. A Ukukhetha izigidi-gidi imixholo kunye ezinika ezenza ukhetho lwakho emva-kwelanga nokuzifica. Ekuqaleni liziko ecaleni Singapore River, Clarke louay le mihla ekulo zokudla, nemivalo ingqiqo, iivenkile ngemiyinge emincinci kunye ezishishina nolonwabo. Zama Bar Cocoon okanye Bamboo Bar kwi The City Lev, Lunar Asian Fusion Bar ye ibonisa ezinkulu, okanye Bar Opiume kwi uKumkanikazi Indawo lomlambo kunye koko Attica okanye Iseyile ukuba emva kweeyure Rave. Le Clarke louay yasebusuku, olugqibeleleyo kuye konke okusemandleni nemivalo, pubs neentonga nje ukubetha yaye - musa ukulibala ukuba khangela 'Top 10 yasebusuku e Clarke louay' wethu isikhokelo kakhulu.